Apokalypsy 5: 1-14
Apokalypsy 4 Apokalypsy 5 Apokalypsy 6
Ary hitako fa indro, nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivohony, voapetaka mafy tamin'ny tombokase fito, teo an-tànana ankavanan'Ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana.
Ary hitako fa, indro, nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe: Iza no mendrika hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny?
Ary tsy nisy tany an-danitra, na tety an-tany, na tany ambanin'ny tany, nahasokatra ny boky na nahajery azy.
Ary nitomany mafy aho, satria tsy nisy hita miendrika hanokatra ny boky na hijery azy.
Ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe: Aza mitomany; indro, ny Liona avy amin'ny firenen' i Joda, dia ny Solofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny fito.
Ary hitako fa, indro, teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manan-aina efatra ary teo afovoan'ny loholona dia nisy Zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanan-tandroka fito sy maso fito, dia ny Fanahy fiton'Andriamanitra nirahina hankany amin'ny tany rehetra.
Ary tonga Izy ka nandray ny boky teo an-tànana ankavanan'Ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana.
Ary rehefa nandray ny boky Izy, ny zava-manan-aina efatra sy ny loholona, efatra amby roa-polo dia niankohoka teo anatrehan'ny Zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditin-kazo manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany.
Ary nihira fihiram-baovao izy ka nanao hoe: Hianao no mendrika haka ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny; fa voavono Hianao, ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny, sy ny olona ary ny firenena rehetra;
Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ireo; ary manjaka ambonin'ny tany izy.
Ary nahita aho sady nandre feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-manan-aina ary ny loholona, ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo,
nanao tamin'ny feo mahery hoe: Ny Zanak'ondry, Izay novonoina, dia mendrika handray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra.
Ary izao zavatra ary rehetra izao, na izay any an-danitra, na izay ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany, na izay any an-dranomasina mbamin'izay rehetra ao anatiny dia reko samy nanao hoe: Ho an'Ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny Zanak'ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay.
Ary ny zava-manan-aina efatra nanao hoe: Amena. Ary ny loholona dia niankohoka ka nivavaka.